သိုးကလေ (Poem of Bagan Period) မြန်မာ+အင်္ဂလိပ်ဘာသာပြန် | м м ť ђ ĩ ŋ ķ є я ကိုသင်ကာ
သိုးကလေ (Poem of Bagan Period) မြန်မာ+အင်္ဂလိပ်ဘာသာပြန်	Posted by mm thinker on February 16, 2008
Posted in: Art.	Tagged: Poem, Translation.	Leaveacomment
၁။ သိုးကလေ၊ ပုပ္ပားနတ်တောင်၊ အခေါင်မြင့်ဖျား၊ စုံတောပြား၌၊ နံ့ရှားကြိုင်လွင့်၊ ခါတန်ပွင့်သည်၊ ရွှေနှင့်ယိုးမှား ပန်းစကား။
Oh Nat-spirit with the headdress of Tho-saung
၂။ သိုးကလေ၊ စကားပွင့်နှင့်၊ နှိုင်းတင့်နိုးသည်၊ ရဲမျိုးသမီး၊ မောင်ကြီးနှမ၊ ညက်လှပြာစင်၊ မယ့်သည်ပင်သည် ခရီးသား။
She hadalover kept in the heart of her heart. He was not with her. He wasaserviceman away onajourney.
၃။ သိုးကလေ၊ မြိတ်လွတ်စုလည်း၊ အငယ်တည်းက၊ ကျွမ်းဝင်ကြသည်၊ မွေးဖတူရင်း၊ မျိုးသည်မင်းနှင့်၊ ချစ်ခြင်းစုရုံး၊ သက်ထက်ဆုံးသည်၊ နှလုံးမခြား စောင့်တရား။
Oh Nat-spirit with the headdressof Tho-saung
၄။ ဆွေမိမင်း၊ မျက်သုတ်နီစင်၊ ရထည်းဖျင်နှင့်၊ ကျိုင်းစဉ်မြ၀ါ၊ မတ်ကြီးလျာကို၊ မယ်သာကြိုက်မိ တုမရှိ။
Her relative lover woreared towel
Her love for him was beyond measure. (Anonymous, Bagan Period)
This Linka (လင်္ကာ), the simplest form of Myanmar verse which has exact meter, rhyme and rhythm, wasasort of ode to the Nat-spirit of Mt.Popa composed by an unknown poet. The content of this Linka suggests the tragic story ofamighty Blacksmith Tint De (ပန်းပဲမောင်တင့်တယ်) and his cousin sister both of whome met violent death and were believed to have become Nat-spirits dwelling on Mt.Popa till today. (from An Outline History of Myanmar Literature by Dr. Khin Maung Nyunt, p 11-12)
(ကိုဘကောင်း ကမကထပြုတဲ့ Burmafication မှာလည်း တင်ထားပါတယ်။ အဲဒီမှာ ရှေးခေတ်ဟောင်းကဗျာ၊ လင်္ကာ အင်္ဂလိပ်ဘာသာပြန်တွေကို ကျနော်ဆက်တင်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။)
← ၂၂၊ ဖေဖော်ဝါရီ	In Progress →	0 comments on “သိုးကလေ (Poem of Bagan Period) မြန်မာ+အင်္ဂလိပ်ဘာသာပြန်”
layma on February 17, 2008 at 11:31 am said:
english for success မှာတွေ့ကတည်းက သဘောကျနေတာ…။ ဆယ်တန်းကျောင်းသူလေး ခဏပြန်ဖြစ်သွားတယ်..။ကျေးဇူး..။
Reply	maymoe on February 25, 2008 at 10:34 pm said:
Reply	maymoe on February 25, 2008 at 10:36 pm said:
ဆယ်တန်း အင်္ဂလိပ်စာလဲ တင်ပေးပါဦး။